Waa Maxay dulucda maalinta warbaahinta Soomaaliyeed? | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / Waa Maxay dulucda maalinta warbaahinta Soomaaliyeed?
Waa Maxay dulucda maalinta warbaahinta Soomaaliyeed?
Himilo FM – Maalin Axad ah, 21 bisha Janaayo sanadkii 1973 ayaa markii ugu horreysay lasoo saaray wargeys ku qoran af-Soomaali sannad kadib markii la qoray afka iyadoo maanta la xusayo maalintan u gaarka ah warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaa lagu sifeeyaa wargeysyada keyd aan lumeyn oo markasta laga dhigan karo tixraac.
Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa shil diyaaradeed oo hadda kahor dhacay, codadkii laga duubay waagaas ma hagaagsana maanta: qoraalka sheekadase waa la heli karaa , waana midda tuseysa warbaahinta Soomaaliyeed in qoraalka uu ka horreeyo codka.
45 sanno kaddib, khubarada saxaafadda ayaa kula talinaya warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan midda adeegsata codbaahiyaha inay sameystaan keyd qoraaleed ku saabsan xogaha ay baahiyaan iyaga oo qaadanaya waanada dhaxal-galka leh ee laga qabtay abwaankii Soomaaliyeed oo ahayd: wixii qoran baa quruumo haree, muxuu hadal qiimo leeyahay!
Arrinta xusida mudan waxay tahay in inta badan warbaahinta Soomaaliyeed aysan adeegsan af-soomaali aan barax laheyn. Waxayna tani reebi kartaa saameyn taban oo aan la mahdin.
Munaasabadaha joogtada ah ee la qabto kuna saabsan saaxafadda iyo horumarinteeda waxaa markasta laga sheegaa in wariyayaasha u hiiliyaan afkooda hooyo iyaga oo adeegsanaya xirfadooda hase ahaatee waxay tani in muddo ah u muuqanaysaa baaq aan mira dhal noqon.
Amiin Yuusuf Khasaaro oo ah qoraa iyo waayo joog Soomaaliyeed ayaa u sheegay Himilo FM in laga gaabiyay xuska maalintan marka loo fiiriyo sida loo qaban jiray. Waxaa kale oo uu xusay in bulshada noqotay bulsho wax dhageysata keliya balse aan wax akhrin isaga oo ku ku baaqay akhris badan oo uu yiri waa furaha keliya ee luqadda lagu ilaalin karo.
“Way jirtaa in af-Soomaali badan lagu adeegsado baraha bulshada hase yeeshee mid khaldan,” ayuu raaciyay hadalkiisa Khasaaro.
Previous: Manchester City oo u dhaqaaqday kabtanka La Masia
Next: Oxfam: Taajiriinta iyo saboolka caalamka midba dhankiisa u badiyay!